Ny Olana Rehefa Voafidy Ho Ben’ny Tanàna Any Rosia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Oktobra 2013 23:25 GMT
Niafara tamin'ny fandresen'ilay mahery fo miady manokana amin'ny zava-maha-domelina sy mitera-dresabe no sady mpanohitra ary solombavam-bahoaka taloha tao amin'ny Douma, Evgeny Roizman, ny fifidianana ben'ny tanàna ny volana lasa teo tany Ekaterinbourg, izay nahazoany 33.21% tamin'ny vato. Taorian'ny fifidianana, nanamafy an'i Roizman ho ben'ny tanàna tamin'ny fomba ofisialy ny Douma ao amin'ny Fanjakan'i Ekaterinbourg (tanatin'izay tokony atao hoe fizotra mahazatra). Raha nitanisa ny fomba ara-teknika, mpikambana efatra ao amin'ny parlemantan'ny tanàna avy amin'ireo antoko mpanohitra “A just Rosia” (Rosia Marina) sy ny Antokon'ny Mpisotro Ronono no nanohitra io fivoriana fametrahana azy io, izay nanao fitafy mitovy tanatinà lapam-pitsarana iray ao amin'ny Distrikan'i Leninski ihany koa mba hanoherany ny maha-ara-dalàna ny fizotran'ny isa tratrarina amin'ilay fivoriana. Nilaza ireo mpanohitra ao amin'ny Douma am-panjakana fa tsy ampy isa ireo olom-boafidy nanatrika io fivoriana io, ary nisy fivoriana fanaraha-maso ny fanatanterahana izany natao avy hatrany taorian'izay, izay nandika ny lalàna.
Nisy ireo niarahaba ny fankatoavana tsy misy henatra an'i Roizman. Manoratra ny mpampiasa ny LiveJournal teh_nomad [ru] fa dia ampoizina ny hisian'ny fifandrafian-kevitra mandritra ny fotoana maharitra, ary miteny:
Ny 3 oktobra 2013, nanamarina [ru] ny maha-ara-dalàna ny fivorian'ny Douma am-panjakana izay nanamafy ny fandresen'i Roizman tamin'ny fifidianana ny lapam-pitsaran'i Yekaterinburg, nanaporofo ny fahadisoan'ireo mpitoraka bilaogy tahaka an'i teh_nomad, izay naminavina zotram-pitsarana fanaisorana.